Dihy an-tanàn-dehibe : hivelatra kokoa ny « Festival Ambony Ambany 5 » | NewsMada
Dihy an-tanàn-dehibe : hivelatra kokoa ny « Festival Ambony Ambany 5 »
Misokatra ny fisoratana anarana ho an’ireo maniry haneho ny talentany sy hifaninana mandihy hip-hop, dance-hall na koa krump. Izany hoe, ireo karazan-dihy an-tanàn-dehibe. Entanina handray anjara amin’izany ny manan-talenta rehetra, hatrany amin’ny faritra.
Tafiditra indrindra ao anatin’ny « Festival Ambony Ambany » ny fifaninanana ary tsy hifarana ny fisoratana anarana amin’izany raha tsy ny 11 febroary izao.
Tonga amin’ny andiany fahadimy ity « festival » tokana iraisam-pirenena momba ny dihy an-tanàn-dehibe ity. Hatramin’izay, nijanona tamin’ny hip-hop ny karazan-dihy nifaninanana. Manomboka amin’ity andiany ity kosa, hivelatra amin’ny dance-hall sy krump izany, araka ny fanazavan’ny mpikarakara.
Manokatra varavarana, ahafahan’ireo tanora manan-talenta maneho izany hatrany ivelany any sy mitondra avo ny voninahi-pirenena eo amin’ny tontolon’ny dihy ny « Festival Ambony Ambany ». Amin’ity indray mitoraka ity, tsy hody miaraka amin’ny loka samihafa fotsiny ireo mpandresy fa mbola hanam-pahafahana mandray anjara amin’ny fifaninanana iraisam-pirenena mihitsy. Araka ny fantatra, any Montpellier no hatao io fifaninanana io, izay hiompana amin’ny break-dance.
Marihina fa misy sokajiny maromaro ny fifaninanana : ny hifanandrinan’ny sekoly mpampianatra dihy, ny hifanandrinan’ny mpianatra avy amina sekoly na koa lycée. Misy koa ny fifaninanan’ny samy matihanina ary ny fifaninanana break-dance.
Iraisam-pirenena ny « Festival Ambony Ambany ». Hanam-bahiny ny amin’ity. Avy any Alemaina, Norvezy ary avy atsy La Réunion izy ireo. Ankoatra ny fandraisana anjara amin’ny fampisehoana samihafa, anisan’ny hitsara ny fifaninanana koa izy ireo ary hifanakalo fahaiza-manao amin’ny mpandihy malagasy.